Ngathi - Hebei Shipu Machinery Technology Co., Ltd.
Hebei Shipu Oomatshini Technology Co., Ltd.
I-Hebei Shipu Machinery Technology Co, Ltd. Ishishini elibanzi lokudibanisa uyilo, ukuvelisa, inkxaso yezobuchwephesha kunye nenkonzo yasemva kwentengiso, izinikezela ekunikezeleni ngenkonzo yokumisa izixhobo zokupakisha ezizenzekelayo kunye nenkonzo yabathengi kubisi lobisi, amayeza, iimveliso zononophelo lwempilo, izithambiso, ukutya kwabantwana, imajarini, izinto zokuthambisa, ishishini lamachiza kunye namanye amashishini. Ngeli xesha linokubonelela ngoyilo olungaqhelekanga kunye nezixhobo ngokweemfuno zeetekhnoloji kunye nolwakhiwo lweeworkshop zabathengi.
Phantse iminyaka engama-20 yembali, inkampani iseke ubudlelwane bokusebenzisana namashishini awaziwayo kwihlabathi kolu shishino, njenge-Unilever, P & G, Fonterra, Kerry kunye nokunye, banikezela abathengi ngezixhobo ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo zobugcisa ezigqibeleleyo kunye inkxaso, eye yanconywa kakhulu ngabathengi.
Okwangoku, inkampani ineengcali ezingaphezu kwe-50 kunye nabasebenzi, ngaphezulu kwe-2000 m2 yocweyo kushishino, kwaye iphuhlise uthotho lwezixhobo zokupakisha eziphezulu ze- "SP", ezinje nge-Auger filler, iPowder inokugcwalisa umatshini, Ukuxutywa komgubo umatshini, i-VFFS kunye njl. Zonke izixhobo zidlulile ukuqinisekiswa kwe-CE, kwaye ziyahlangabezana neemfuno zokuqinisekiswa kwe-GMP.
Ngaphantsi kwesikhokelo somgaqo-nkqubo wesizwe "we-Belt enye kunye neNdlela enye", ukulungiselela ukuphucula ifuthe le-China Intelligent Manufacturing, inkampani isekwe kuphuhliso nakwimveliso yezixhobo zokupakisha eziphezulu, kunye nentsebenziswano kunye negama elidumileyo lamazwe aphesheya ababoneleli, abanjengo: Schneider, ABB, Omron, Siemens, SEW, SMC, Mettler Toledo, njl. Ngokusekwe kwiziko lemveliso eShanghai, siphuhlise ii-ofisi zengingqi kunye neearhente e-Ethiopia, eAngola, eMozambiki, eMzantsi Afrika nakwezinye iingingqi zeAfrika. , ezinokubonelela ngenkonzo ekhawulezileyo yeeyure ezingama-24 kubathengi balapha. I-Middle East kunye ne-Southeast Asia iiofisi zengingqi nazo ziyalungiselela.
Ukuqhubeka "kwabathengi becinga ukuba bacinga ngokungxamiseka kwabathengi" njengomgaqo wenkonzo, u-Hebeitech ujolise ekunikezeleni umcebisi wezobuchwephesha kubathengi, ukwenzela ukuba kube lula ukwenza inkqubo yoyilo, ukhetho lwezixhobo, ulwakhiwo lweeworkshop kunye namanye amakhonkco amaninzi abathengi, kunye nokuphucula ukusebenza kotyalo-mali.
Nje ukuba ukhethe i-Hebeitech, uya kufumana ukuzibophelela kwethu:
"YENZA UTYALO-MALI NGAKUMBI NGOKULULA!"